Fifidianana ankapobeny Indoneziana 2019: Hetsika tsy manam-paharoa avy amin’ireo andiana fanentanana · Global Voices teny Malagasy
Mpanoratra Carolina, Wisnu Hanggoro Nandika (en) i Andi Tenri Wahyuni, Andriamifidisoa Zo
Voadika ny 05 Jolay 2019 12:38 GMT
Sarin'ny sarin'ny Filoha Joko Widodo sy ny mpirotsaka ho filoham-pirenena Prabowo Subianto, avy amin'ny kaonty Instagram-ny tsirairay avy. Samy nampiasa Instagram ireo kandidà roa ireo hampisehoana ny fanohanan'ny vahoaka.
Tamin'ny 17 aprily 2019, 193 tapitrisa ny mponina indoneziana nandatsa-bato hifidy mpitarika vaovao tamin'ny alàlan'ny birao fandatsaham-bato miisa 800.000 mahery niparitaka nanerana ny vondronosy. Araka ny hevitr'ilay gazetiboky aostraliana, ny Lowy Institute, io no manavaka an'i Indonezia ho tsy manampaharoa amin'ny fanatontosana fifidianana lehibe indrindra ao anatin'ny indray andro ho an'ny firenena demaokratika iray.
Tamin'ny 21 may 2019, nanambara ny Vaomieran'ny Fifidianana Ankapobeny (KPU) fa nahazo fe-potoana iasana iray hafa ny filoha amperin'asa Joko Widodo (fantatra amin'ny anarana hoe Jokowi). Nitsipaka izany vokatra izany ny mpifanandrina aminy, Prabowo Subianto, ary niampanga ho misy fangalaram-bato ao amin'ny KPU. Teo am-pahitana ny voka-pifidianana mampivarahontsana, niditra lalindalina kokoa ny Global Voices hankao amin'ity toe-javatra tsy manampaharoa mitranga mandritra ny taom-pifidianana ity.
Fotsy: Lokon'ny kandidà roa tonta sy ny hetsika manohitra fandrotsaham-bato
Tamin'ity fotoam-pifidianana indray mitoraka ity, nandray dika vaovao avy amin'ireo sokajy ara-politika maro ny loko fotsy. Ho an'ny mpanara-dia an'i Jokowi, lobaka fotsy iray –izay lasa nanome marika famantarana araka ny fanaon'i Jokowi — no fitafy iraisana nosafidian'ny mpanohana azy. Araka ny lazain'ny sasany, iray amin'ny voambolana fitenin'i Jokowi sy ny mpanaraka azy indrindra ny ‘fotsy’.
Eo amin'ny antoko mpanohitra, ireo mpanohana an'i Prabowo Subianto avy ao amin'ny Tsenan-Kevitra Islamika (FUI) sy ny Mandam-Piarovana Islamika (FPI), vondrona Islamista hiringiriny roa, dia nandrisika ny mpiray tanindrazana aminy mba hanao akanjo fotsy ry zareo amin'ny androm-pifidianana. Manao akanjo fotsy lava matetika ireo Miozolomana mpandala nentin-drazana avy amin'ireny fikambanana ireny, ary ny akanjo dia lasa mitovy amin'ny vondrona misy azy.
Azo jerena ho mariky ny tànana fotsy izay maneho ‘tsy misy ranomainty’ ihany koa ny loko fotsy. Any Indonezia, atao amin'ny rantsan-tànan'ny mpifidy ny ranomainty raha vantany vao nandatsaka ny vatony izy ireo. Tena sarotra ny manasa ny ranomainty ary manampy amin'ny fisorohana ny fandrotsaham-bato fanindroany. Ny teny faneva ao ambadik'ity dia ny ‘Golput’, izay fanafohezana ny ‘golongan putih’ (vondrona fotsy).
Tamin'ny taona 2014, mahatratra 30,14 isanjaton'ny mpifidy voasoratra anarana no tsy nandrotsa-bato tamin'ny fifidianana. Nandritra ity fotoam-pifidianana ity, teo anivon'ny adihevitra ny hetsika Golput satria manohitra ny tsy fifidianana ireo antoko ara-pinoana samihafa. Mandrara ny tsi-fandehanana mifidy ny Majelis Ulama Indonezia (MUI), ilay andry ahitana ireo mpitondra ambony amin'ny fivavahana silamo ao Indonezia. Fanampin'izany, namoaka lahatsoratra nahitana hevitra tsy misorona miampanga ny tsy fandehanana mifidy ny pretra katolika Romo Franz Magnis .
Na izany aza, nilaza ny Indoneziana mpikaroka ara-politika sy ara-tafika Made Supriatma fa safidy politika ny tsy fandehanana mifidy amin'ny fifidianana:
Tsy araka izay lazain'i von Magnis izay nametraka fa vetaveta, izaho kosa mahita fa misy andraikitra ara-pieritreritrana io safidy io.
Lazain'i Von Magnis ho adala, mpitsentsitra ary tsy matotra ara-tsaina ireo nanapa-kevitra ny tsy ho tonga hifidy.
Fa marina tokoa ve hoe hetsika vetaveta ny tsy mifidy? Voalohany, heveriko fa mila arenintsika izay dikan'ny “golput”. Misy fisavoritahana be amin'ilay voambolana. Maro amin'ny olona no zara mahazo ny dikan'ny hoe tsy mandeha mifidy ilay tsy misafidy. Mila manoritra isika hoe fihetsika io. Fa tsy toetra. Koa satria fihetsika fotsiny io, dia maro karazana ny antony mahatonga ny tsy fandehanana mifidy. Natao izany amin'ny ankapobeny tsy hoe toetra, ary tsy hoe fanambaràna politika.
Efa navoitrako fa maro ny olona nisafidy ny tsy hifidy noho ny antony lehibe. Tsy tokony horaisina an-jambany izany [hetsika izany]. Araka ny hevitro, endrika tsy fahatombenana ara-tsaina ny manohana an-jambany kandidà iray ary mandray anjara amin'ny fandrovindrovitana ny fiainana ara-tsosialin'ity firenena ity. Moa ve tsy izany no mitranga amin'ireo mpanohana mavitrika amin'ny kandidà filoham-pirenena ireo?
Fahafatesana maro any amin'ny foibem-pifidianana
Iray amin'ny tranga hafa mahatalanjona ihany koa izay nitranga nandritra ity fihodinam-pifidianana taona 2019 ity, ny fandrenesam-baovao fa mihoatra ny arivo ny mpiasan'ny fifidianana no narary ary efa ho akaikin'ny 300 no maty noho ny harerahana na ny mifandraika amin'izany.
Fiaraha-miory lehibe ho an'ireo Maherifon'ny demaokrasia Indoneziana #IndonesiaElectionHeroes Mankasitraka amin'ny fanolorantenanareo sy ny fanompoana amin'ny fametrahana ny demaokrasia Indoneziana
Misy moa ny adi-hevitra mandeha hoe mety ho inona no anton'izany fahafatesana izany, tsindry ara-tsaina ve sa ny asa mafy sy mavesatra takiana amin'ireo mpiasan'ny foibem-pifidianana.
Nanoratra ny fiaraha-mioriny tao amin'ny kaontiny Facebook ny Filoha Joko Widodo:
Di luar sukses penyelenggaraan hajatan demokrasi ini, kita telah mendengar kabar duka mengenai meninggalnya sejumlah petugas KPPS dan juga aparat Kepolisian RI, karena kelelahan dan sebab lainnya
Ankoatra ny fankalazana ny fahombiazan'ny demaokrasia, nahare vaovao mampalahelo amin'ny fahafatesan'ny mpiasan'ny KPPS sy polisy maro dia maro izahay noho ny harerahana be loatra sy ny antony hafa.
Maneho ny fiaraha-miory lalina amin'ireo fianakaviana nilaozana aho, amin'ny anaran'ny tenako, amin'ny anaran'ny governemanta, ary amin'ny anaran'ny fanjakana. Mpiadin'ny demaokrasia maty am-perinasa ireo mpiasan'ny KPPS sy ireo manamboninahitra polisy ireo.
Enga anie Allah hanaiky ny voa tsara rehetra avy amin-dry zareo, ho lasa fitahiana ho an'i Indonezia, ary manantena fa omena tanja-tsaina ireo fianakaviana nilaozana.
Ho afa-mandresy ireo olana lehibe mianjady [miraikitra] amin'i Indonezia ve ireo kandidà?
Amin'ny ankapobeny dia fahombiazana ho an'ireo antoko politika efa nijoro ela ny andiam-pifidianana taona 2019. Zara fa hita ao amin'ny safidin'ny mpandrotsa-bato ny Antokon'ny Firaisankina Indoneziana (PSI) izay nikendry ireo teraka tamin'ity taonarivo ity, ny Antoko Berkarya tarihan'i Tommy Suharto (zanakalahin'i Suharto filohan'i Indonezia teo aloha Suharto), ary ny Antokom-Piraisaina Indoneziana (Perindo) natsangan'ny mpanankarena iray akaiky an'i Donald Trump.
Efa nahitana ary mbola ahitana voina ity fotoam-pifidianana ity nandritra ny fanentanana; saingy, ny tsy hita mandritra ny fanentanana dia ireo fandaharan'asan'ny kandidà roa amin'ny famahàna ny olana ara-tontolo iainana, ny zon'ny vehivavy sy ny ankizy, ny fanitsiana ny fanjakanm-birao, ny mety hiverenan'ny asa roa ataon'ny TNI, ary ireo raharaha hafa.
Rehefa tsy misy fandaharana mazava ireo kandidà sy politisiana, dia mbola hiady mafy ireo tafiditra amin'ny fitantanam-panjakana handresy ireo fisaratsarahana ara-pivavahana, mpiasam-panjakana mpanao kolikoly, ary ny tsi-fisaziana amin'ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona.
Nandika (en) i Andi Tenri Wahyuni